Programme PROSPERERFOARA, sehatra iray ifaneraseran’ny mpamokatra amin’ny mpanjifa. - Programme PROSPERER FOARA, sehatra iray ifaneraseran’ny mpamokatra amin’ny mpanjifa. - Programme PROSPERER
Nandritra ny taona maro, niara-niasa akaiky tamin’ireo mpiara-miombon’antoka maro ny Fandaharanasa FANOITRA tamin’ny fikarakarana tsena na foara na amin’ny fandraisan’anjara ihany koa amin’ireo foara efa misy eny anivon’ny faritra na distrika na nasionaly mihitsy. Isan’ireny mpiara-miasa akaiky ireny ny Chambre de commerce et d’Industrie, ny Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, Ny Direction Régionale de l’Environnement et de l’…. ny Faritra, ireo ONG, ireo Fikambanana tantsaha na vondron’ny mpamokatra, …Tanjona tamin’ireny ny hampihaonana mivantana ireo mpamokatra amin’ny mpandraharaha ara-barotra matihanina.
Isan’ireny Foara nokarakaraina ireny ny Foara FANOITRA ho an’ny Faritra Itasy sy Bongolava, ny Valiaha sy ny Ankolagny ho an’ny Faritra Sofia, ny Teandragna ho an’ny Faritra Atsinanana sy Analanjirofo, ny Voatra ho an’ny Faritra Analamanga, ny Foara Lojy Mitsangana sy Voamaina ho an’ny Faritra Boeny. Nisy koa anefa ireo foara nandraisana anjara toy ny Foire International de l’Agriculture (FIA), ny Fier MADA, ny Foire de l’Elevage, de la Pêche et de l’Agriculture (FEPA), ny SIM, ny Foire BIO, ny Foire du Lait, …
Alohan’ny foara, ny GUMS izay ahitana ireo ONG na Fikambanana miara-miasa amin’ny Fandaharanasa eny anivon’ny Distrika no miandraikitra ny fifantenana sy fanomanana ireo orinasa madinika hiatrika ny foara. Ao anatin’izany fanomanana izany ny famokarana vokatra maro, ny fanaraha-maso ny kalitaon’ny vokatra, miantoka ny fanamorana ny fiatrehan’ny mpisitraka ny foara amin’ny alalan’ny torohevitra isan-karazany.
Mandritra ny fanatrehana foara na tsena kosa, mandray anjara feno amin’ny fanamorana ny fampihaonana ny fikambanan’ny mpamokatra amin’ny mpandraharaha ara-barotra ny Chambre de Commerce et d’Industrie amin’ny alalan’ireo mpiandraikitra lalam-barotra na agent commercial rehetra isaky ny Faritra. Ankoatry ny fanamorana dia izy ireo ihany koa no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny varotra ary tonga hatramin’ny fanaovan-tsonia fifanarahana ara-barotra aorian’ny foara.
Hatreto aloha, indrindra fa ireo foara nasionaly, dia nahitam-bokatra tsara avokoa. Maro hatrany ireo mpandraharaha ara-barotra liana sy nitady fiaraha-miasa tamin’ireo mpamokatra toy ny Orinasa JB izay nanana filana katsaka hatramin’ny 5 taonina, ny Orinasa VONA MADY nitady tongolo 45 taonina isan-kerinandro, ny orinasa CM AGRO Madagascar Morarano Ambatolava izay nitady mananasy 150 isan-kerinandro,…
Aorian’ny foara dia misy hatrany fivoriana iarahan’ny roa tonta (vondron’ny mpamokatra sy ny mpandraharaha ara-barotra) mba ahafahana manamafy hatrany ny fiaraha-miasa, izay eo ambany fanamoran’ny mpiandraikitra lalam-barotra hatrany. Raha mety amin’ny roa tonta dia mitohy amin’ny fanovan-tsonia ny fiaraha-miasa.
Fotoana mety ary tsara araraotina ny foara. Tsy ny varotra mandritra izany ihany no tombony azo fa indrindra ireo varotra aorian’ny foara ihany koa. Irariana ny hiafaran’izao valan’aretina Covid-19 izao mba hitodian’ireo mpamokatra amin’ny varotra indray mba hialana amin’ny fahasahiranana sy hampisondrotana haingana ny fiharian-karena eto Madagasikara.